HTML Email Imewe Ihe Nlereanya Iji na-aga aga
E kwuwo na ịmepụta email dabere na HTML na 2009 dị ka ịmepụta ibe weebụ na 1999. Ọ dị mwute ma ọ bụ eziokwu. Inye ya ogugu bu ihe mgbe ochie, ma e jiri ya weghaara websaịtị 2.0 nke oru, oke a di nnukwu.
Yabụ mgbe ndị na-ere ahịa email chọrọ ibugharị ngagharị, na-eme ka ụzọ ngosi na ịkpọ oku rụọ ọrụ ha na-eji GIF ndị na-eme ihe nkiri. Tupu Flash, ihe ngosi GIF dị mfe bụ usoro nke ụbọchị ahụ.
Ojiji nke email na-aga n'ihu na-abawanye. Ntak, ị jụrụ?
GIF ndị na - emegharị ahụ na - akwado ndị ahịa email dị ukwuu yana ihu ihu weebụ
Ọ na - enyere ndị ahịa aka ịpụ n’etiti igwe mmadụ
Nke kachasị mkpa, ha dị ka ha na-arụ ọrụ!
ROI siri ike na ihe nkiri
Nke a na nso nso a Nnwale A / B site BlueFly hụrụ email animated na-adọta na 12% karịa ego karịa ndị na-abụghị animated Ẹkot. N'otu aka ahụ, nke a ikpe ọmụmụ na Ahịa Sherpa, Chocola Chocolate ndị ọzọ nwetara mmụba ahịa nke 49% na ekeresimesi n'ihe metụtara mkpọsa na-eji GIF ndị na-eme egwuregwu tụnyere mkpọsa n'afọ gara aga.
Ọbụna Uru ndị ọzọ
Mbụ, ndị na-ere ahịa nwere ike iji obere ohere iji gosipụta ọtụtụ ngwaahịa, onyinye pụrụ iche, ma ọ bụ oku na-eme ihe, yana ịbawanye ọnụ-site na ọnụego iji kwado vidiyo. Ndị na-ere ahịa Smart nwekwara ike iji ihe nkiri na-agba ume ka ịpịgharị na ọtụtụ ozi ịntanetị ogologo (ma ọ bụ kwụ).
Na ọghọm ya
Okwu nkwekorita kachasị mkpa bụ otu ozi ịntanetị na-eme na Outlook 2007. Nke ahụ bụ, naanị igbe izizi nke GIF ndị na-eme egwuregwu gosipụtara. Y’oburu na ichoro ikwuputa ozi gi n’ime ihe mbu, oburu n’abia. Want ga-achọkwa iburu n'uche na ogo nke GIF ahụ na-emegharị ahụ (na kilobytes) nwere ike imetụta ọsọ na usoro nke ihe oyiyi gị.
Animated Email Ihe Nlereanya
Oku-ka-Action Ihe Nlereanya: Banana Republic, Lexus, Piperlime
Ihe Ngosiputa Ngwa Ahia: Ọgwụgwụ Ala, Art
Ihe Nlereanya Vidiyo Uhie
Misc. Ojiji Ihe Nlereanya: Ọ bụ Norm Thompson, Aeropostale
Iji nghọta miri emi banyere ebumnobi gị na ahụmahụ email mmebe ị ga-enwe ike ịbawanye pịa-site na ntụgharị ntụgharị site na iji animation.
Tags: animatedanimation gifAnimationemail na-aga aga